Akụrụngwa akpụkpọ anụ kacha mma maka Samsung galaxy tab a 10.1 2019 maka Lenovo tab M10 gbakwunyere maka mbadamba mbadamba Manufacturer na Factory | Ndị njem
Iguzo akpụkpọ anụ maka Samsung galaxy tab a 10.1 2019 maka Lenovo tab M10 gbakwunyere maka mkpuchi mbadamba
Kachasị chepụta adn ọrụ imewe
na ihe siri ike na-ewu ụlọ na foldable guzobere imewe, Tinye na azụ Igwe ọrụ ndọta, mkpuchi ahụ na-agbachi azụ ma na-echekwa azụ azụ nke ikpe, Mgbe ị na-agụ ihe, ọ ga-ahụ na ngwaọrụ mbadamba agaghị agbada.
UTLỌ Ura / Tetanụ
Na-akpaghị aka na-eteta ma ọ bụ tinye mbadamba nkume gị ịrahụ ụra mgbe emepere mkpuchi ma mechie, ka ịchekwa ike ma gbasaa oge ọgụgụ ihe n'ụzọ dị irè karị.
Mgbe mkpuchi dị nso na mbadamba mbadamba nkume, mbadamba nkume ga-ehi ụra.
Ihe ngosi mara mma: ikpe ahụ agaghị eteta ma hie ụra mgbe mbadamba nkume anaghị akwado ọrụ ahụ.
Zuru ezu Nchedo
Shockproof ike azụ ikpe iji chebe gị mbadamba nkume si ịtụ ụjọ na tụlee. Ihe dị nro microfiber na-ekpuchi ime mkpuchi ihu iji gbochie nchacha ihuenyo ndị ọzọ mmebi kwa ụbọchị.
Magnetik mgbachi esetịpụ gị mbadamba emechi na ntukwasi-obi mgbe ọ na-aga. Ọ na - ahụ maka mkpuchi ejiri emechi emechi, na - echekwa Ngwaọrụ gị nke ọma. Ọma zere igbochi oghere mberede nke mmechi mmechi scratching ngwaọrụ. Ọ na-echebe ngwaọrụ gị n'akụkụ niile.
Na-ekwe ka ịnweta ọdụ ụgbọ mmiri niile dị mfe, ihe mmetụta, okwu okwu, igwefoto na-ewepụghị ikpe ahụ.
Nwere ike ịgba ya ụgwọ, jiri ntị ntị na igwefoto na ikpe, ịkwesighi iwepu ya.
HECTR. adịchaghị Akụrụngwa
ekpuchi bụ nke ihe eji emepụta ihe eji emepụta akpụkpọ anụ na-echekwa ngwaọrụ ahụ na ncha, Soft microfiber ime na PC siri ike ma ọ bụ shea TPU dị nro na-echedo mbadamba nkume gị site na ujo, mmetụta, ihe ọghọm na mberede.
Otutu Nlele uzo
Otutu grooves na-enwe ike melite multiple kehoraizin guzoro akụkụ; Mbadamba gị nwere ike iguzo na-ele ma na-ede akụkụ; Nwere ike ịgbanwe akụkụ ahụ na uche gị.
Ihe: Pu akpụkpọ anụ na microfiber
Azụ azụ: PC siri ike (ịnabata ajụjụ maka shea TPU dị nro)
Njirimara: Guzo PU akpụkpọ anụ mpịachi ikpe
Agba: Black, ọchịchịrị-acha anụnụ anụnụ, aja aja, silk e biri ebi, na ndị ọzọ OEM / ODM agba
OEM / ODM: Nabata
Ọrụ: ụra na-eteta na teta (belụsọ mbadamba enweghị ọrụ a)
Pensụl njide: OEM / ODM
Njikọ ndọta: Ee
Size: 16.8 * 24.3 * 1 (cm)
Tabletgbaso mbadamba ikpe dị. Ndị ọzọ mbadamba okwu na-anakwere OEM / ODM.
N'ihi na Apple
iPad 10.2 2020 ọgbọ nke asatọ
Nlereanya: A2270, A2428, A2429, A2430;
iPad 10.2 2019 ọgbọ nke asaa
Nlereanya: A2197, A2200, A2198
N'ihi na Samsung
Galaxy Tab A7 10.4 "(2020) Nlereanya: SM-T500 SM-505
Galaxy Tab S7 11 "(2020) Nlereanya: SM-T875 SM-870
Galaxy tab S6 Lite 10.4 "2020 Nlereanya: SM-P610 SM-P615
Galaxy Tab S6 10.5 2019 Nlereanya: SM-T860 SM-T865
Galaxy Tab A 8.0 T200 / 205 (2019) Nlereanya: SM-T290 SM-295 SM-297
Galaxy Tab A 10.1 (2019) Nlereanya: SM-T510 SM-T515
Galaxy Tab 10.5 S5E (2019) Nlereanya: SM-T720 SM-T725
N'ihi na Lenovo
Lenovo tab M10 gbakwunyere 10.3 2020 Nlereanya: TB-X606X TB-X606F
Lenovo tab M10 10.1 2019 Nlereanya: TB-X605F TB-X605L
Lenovo M10 HD X306F 10.1 2020 Nlereanya: TB-X306
Huawei matepad 10.4 2020 Nlereanya: BAH3-W09 BAH3-AL00
Huawei mediapad T10s / T10 Nlereanya: AGS3-L09 / W09 AGR-L09 / W09
Huawei Mediapad M6 10.8 Nlereanya: SCM-AL09 SCM-W09
Huawei matepad T8 2020 Nlereanya: Kobe2-l09 Kobe2-l03
Huawei matepad Pro 10.8 Nlereanya: MRX-W09 / W19, MRX-AL09 / AL19
Nke gara aga: Ihe ntụgharị dị arọ nke 360 ​​maka ipad maka Samsung maka mbadamba Lenovo
Osote: Iguzo akpụkpọ anụ maka ipad maka Samsung maka mbadamba Lenovo na eriri aka ya na ihe njide pensụl
Iguzo akpụkpọ anụ maka mbadamba
Gburugburu igodo Bluetooth kiiboodu maka ipad maka Sams ...
Slim guzoro folio ikpe n'ihi ipad mini 6 Smart lea ...
Magnetik ikpe na integrated keyboard maka ipad ...
Shockproof Ileba na Clear Piel Back N'ihi ...
Ikwupụta keyboard ahụ maka iPad 10.2 2020 2019 ...
Ebughibu Shockproof Juputara Case n'ihi ipad maka Samsun ...